Le Prune Prune engu-5 ubudala ingaqamba amazwe angaphezu kwama-150, amafulegi nezindlunkulu - Abaphumelele
Le Prodigy Eneminyaka Emihlanu Engadala Amagama Angaphezu Kwe-150, Amafulegi Nenhloko-dolobha
kanjani ukuqeda inkwethu nokuwa kwezinwele ekhaya
Ngenkathi iningi lethu likuthola kunzima ukuqamba onhloko-dolobha bezwe lakithi, lo ngqondongqondo wahlasela umhlaba ngesikhathi eqamba amazwe ayi-150 kanye nezihloko zawo kanye namafulegi. UPresha Khemani, oneminyaka emihlanu wasePune, eMaharashtra, ungungqondongqondo esikhuluma ngaye! Usanda kuqopha umlando ngokuqamba amazwe, amafulegi kanye nezinhloko-dolobha. Ukwengeza kulokho, le ntombazanyana futhi iyingane encane kunazo zonke ukuqopha irekhodi kwi-World Records India Book.
Ngesikhathi sokuvalwa, iningi lethu lazama ukuhlola amakhono ethu futhi sazithola senza into eyodwa noma enye. Le prodigy eneminyaka emihlanu ubudala, nokho, isebenzise ukukhiya ukuhamba umhlaba isuka egumbini layo. USangeeta Khemani, umama kaPresha, ubalule ukuthi abambalwa emndenini wakubo abanikeze nge-atlas uPresha kwazise ubehlale ethambekele ekufundeni i-geography. Uphinde wathi uPresha ubehlale engumfundi okhaliphile nokuthi ngaphandle kwezifundiswa zakhe, ubephumelela kakhulu cishe kuyo yonke into azibekela yona.
Okuthakazelisa kakhulu, yindlela aqala ngayo ukufunda amagama ala mazwe. “UPresha waba nentshisekelo enkulu emafulethini amibalabala amele amazwe futhi waqhubeka nokungibuza ngezizwe abazimele. Ufunde cishe amazwe angama-150, izihloko zawo kanye namafulegi abo kahle ngendlela ehlelekile. Isonto ngalinye, uthathe izwekazi elilodwa, wafunda ngamazwe namafulegi aleli zwekazi, walibuyekeza nokunye, ”kusho uBharat Khemani, onguyise walesi sihlabani esikhanyayo, etshela abezindaba. Ngaphezu kwalokho, umama wakhe wanezela, “Saqhubeka nezifundo kancane kancane futhi sahlanganisa konke okuqukethwe yincwadi emasontweni ayisikhombisa. Kwesinye isikhathi ngangike ngikhohlwe igama lezwe kodwa uPresha walikhumbula. Kwakungekhona nje ukuphanga. Wayengaphendula, noma ngabe wayecelwa ukuthi akhombe amafulegi amazwe ahlukahlukene ngokungahleliwe. (sic) ”
Ngosizo lweSanskriti School, iBhukum (isikole uPresha ayefunda kuso), abazali bakhe bakwazile ukuxhumana nezikhulu ze-World Record India Book Competition. Baqopha i-video yezimpendulo zikaPresha kokuqukethwe yi-Atlas futhi ngemuva kokuhlolisisa, kwathiwa ungumnikazi werekhodi futhi wanikezwa indondo yegolide ngo-Okthoba 17, 2020.
Noma lokhu kuyimpumelelo enkulu kakhulu kumuntu oneminyaka emihlanu ubudala, kumane nje kuyisiqalo nje sePresha. Umqondo wakhe ubheke ekufundeni amagama ezezimali, izilimi nabaholi bomhlaba bala mazwe.
Funda futhi: Le Ntombazane Eneminyaka Engu-7 Iyaziwa Njengombhali Omncane Kunabo Bonke Emhlabeni
ungasusa kanjani izinwele zobuso ezingafuneki unomphela ekhaya
kanjani ukuqeda inkwethu nokuwa kwezinwele
i-baking soda nelamula ebusweni
izinzuzo ze-yoga asanas ngezithombe
ungasusa kanjani izinwele ebusweni bekhambi lasekhaya unomphela
amathiphu wobuhle basekhaya wokulunga